၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ချန်ပီယံသစ်ထွက်ပေါ်မလား၊ ချန်ပီယံဟောင်းပဲ ဗိုလ်စွဲမလား
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုအတွက် လုဇ်နီကီကွင်းမှာ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ပြင်သစ်နဲ့ခရိုအေးရှား
15 Jul 2018 . 3:38 PM
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်မားဆုံး ချန်ပီယံဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဆုကြီးကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရဖို့ ပြင်သစ်နဲ့ ခရိုးအေးရှားအသင်းတို့ ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၉း၃၀)အချိန်မှာ မော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ လုဇ်နီကီကွင်းကြီးမှာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတော့မှာပါ။ ပြင်သစ်နဲ့ခရိုအေးရှားတို့ဟာ အဆင့်အတန်းခြင်း ကွာခြားပေမယ့် ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ ဒီအချိန်မှာ ချန်ပီယံအခွင့်အရေးက ဆတူရှိနေတာကြောင့် ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူ ခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲလာရာ လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင် ပြင်သစ်အသင်းက အုပ်စုတွင်းမှာ ပီရူး၊ သြစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်တို့နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့် အုပ်စုချောင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ခရိုအေးရှားအသင်းကတော့ Group Of Death လို့ တင်စားခံခဲ့ရတဲ့ သေမန်းတမန်အုပ်စုထဲ ကျရောက်ခဲ့တယ်။ တောင်အမေရိကထိပ်သီး အာဂျင်တီးနား၊ အာဖရိက နာမည်ကျော် နိုက်ဂျီးရီးယား၊ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ မထင်မှတ်ထာတွေကို လုပ်ပြခဲ့တဲ့ အိုက်စလန်အသင်းတို့နဲ့အတူ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး (၃)ပွဲစလုံး အနိုင်ယူ အုပ်စုပထမနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင် ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ ခြေစွမ်း၊ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုကို ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်း၊ ကွာတား၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်တွေကတော့ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ပွဲကျပ်ကာလဖြစ်ပြီး အာဂျင်တီးနား၊ ဥရုဂွေး၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းတွေနဲ့ တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသခဲ့ပြီး အဲဒီ(၃)သင်းစလုံးကို သာမန်ပွဲကစားချိန်မိနစ်(၉၀)အတွင်းမှာပဲ အနိုင်ယူကာ ဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်းက ပြင်သစ်အသင်းထက်စာရင် ပွဲချောင်တယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် တော်တော်လေးရုန်းကန်ပြီးမှာ လုဇ်နီကီကွင်းကို ခြေချနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒိန်းမတ်၊ ရုရှား၊ အင်္ဂလန်တို့(၃)သင်းစလုံးကို ခက်ခက်ခဲခဲကစားရပြီး နှစ်ပွဲက ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်၊ တစ်ပွဲက မိနစ်(၁၂၀)မှာ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရိုအေးရှားအသင်းက ပြင်သစ်အသင်းထက် ပွဲပိုပန်းနေတဲ့အနေအထားလို့လည်း ဆိုရမယ်။
နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ကစားသမားစုဖွဲ့မှု၊ ခြေစွမ်းကို ကြည့်ရင် ကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်မရှိဘူး။ ပြင်သစ်အသင်းမှာ ဘာပေ၊ ဂရစ်ဇ်မန်း၊ ပေါ့ဘာ တို့လို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေရှိသလို ခရိုအေးရှားအသင်းကလည်း ပါရီဆစ်၊ မိုဒရစ်၊ ရာကီတစ်၊ မန်ဇူကစ် စတဲ့ဝါရင့်ကစားသမားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြ ဒက်စ်ချမ့်ဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ရင် ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုရခဲ့တဲ့ ဇာဂါလို(ဘရာဇီးလ်)၊ ဘက်ကင်ဘောင်ဝါ(ဂျာမနီ)တို့နောက်ပိုင်း တတိယမြောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်းနည်းပြဒါလစ်ကတော့ အသင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သလို ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရယူနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ တကယ်လို့ ခရိုအေးရှားအသင်းသာ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဖလားရခဲ့တဲ့ (၈)သင်းမြောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မီဒီယာတော်တော်များများက ပြင်သစ်အသင်း ဗိုလ်စွဲမယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပြီး (၂-၁)ဂိုးရလဒ်နဲ့အနိုင်ရမယ်လို့ သုံးသပ်နေကြတယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ .ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံသစ်ထွက်ပေါ်လာမလား၊ ချန်ပီယံဟောင်းပဲ ဗိုလ်စွဲမလားဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ခန့်မှန်းလိုက်ရကြရအောင် . . .
Photo:Turnt Sports,YouTube,Goli Sports
ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုအတှကျ လုဇျနီကီကှငျးမှာ တိုကျပှဲဝငျကွမယျ့ ပွငျသဈနဲ့ခရိုအေးရှား
ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏျသိက်ခာအမွငျ့မားဆုံး ခနျြပီယံဆုတဈခုဖွဈတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားဆုကွီးကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရဖို့ ပွငျသဈနဲ့ ခရိုးအေးရှားအသငျးတို့ ဒီနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည (၉း၃၀)အခြိနျမှာ မျောစကိုမွို့မှာရှိတဲ့ လုဇျနီကီကှငျးကွီးမှာ ရငျဆိုငျတိုကျပှဲဝငျကွတော့မှာပါ။ ပွငျသဈနဲ့ခရိုအေးရှားတို့ဟာ အဆငျ့အတနျးခွငျး ကှာခွားပမေယျ့ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို ရောကျနပွေီဖွဈလို့ ဒီအခြိနျမှာ ခနျြပီယံအခှငျ့အရေးက ဆတူရှိနတောကွောငျ့ ဘယျအသငျးဗိုလျစှဲမလဲဆိုတာ လှယျလှယျကူကူ ခနျ့မှနျးလို့ မရပါဘူး။ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ဗိုလျလုပှဲလာရာ လမျးကွောငျးကိုကွညျ့ရငျ ပွငျသဈအသငျးက အုပျစုတှငျးမှာ ပီရူး၊ သွစတွေးလြ၊ ဒိနျးမတျတို့နဲ့ ဆုံတှခေဲ့တာကွောငျ့ အုပျစုခြောငျတယျလို့ ပွောလို့ရပမေယျ့ ခရိုအေးရှားအသငျးကတော့ Group Of Death လို့ တငျစားခံခဲ့ရတဲ့ သမေနျးတမနျအုပျစုထဲ ကရြောကျခဲ့တယျ။ တောငျအမရေိကထိပျသီး အာဂငျြတီးနား၊ အာဖရိက နာမညျကြျော နိုကျဂြီးရီးယား၊ နောကျပိုငျးနှဈတှမှော မထငျမှတျထာတှကေို လုပျပွခဲ့တဲ့ အိုကျစလနျအသငျးတို့နဲ့အတူ ဆုံတှခေဲ့ပွီး (၃)ပှဲစလုံး အနိုငျယူ အုပျစုပထမနဲ့ နောကျတဈဆငျ့တကျခဲ့တာကိုကွညျ့ရငျ ခရိုအေးရှားအသငျးနဲ့ ခွစှေမျး၊ စိတျဓာတျပွငျးထနျမှုကို ပရိသတျတှမွေငျတှနေို့ငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျး၊ ကှာတား၊ ဆီမီးဖိုငျနယျတှကေတော့ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ပှဲကပျြကာလဖွဈပွီး အာဂငျြတီးနား၊ ဥရုဂှေး၊ ဘယျလျဂြီယံအသငျးတှနေဲ့ တောကျလြှောကျရငျဆိုငျခဲ့ရတယျ။ ပွငျသဈအသငျးဟာ ခနျြပီယံဖွဈနိုငျတဲ့ခွစှေမျးမြိုးပွသခဲ့ပွီး အဲဒီ(၃)သငျးစလုံးကို သာမနျပှဲကစားခြိနျမိနဈ(၉၀)အတှငျးမှာပဲ အနိုငျယူကာ ဗိုလျလုပှဲတကျရောကျခဲ့တယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျးက ပွငျသဈအသငျးထကျစာရငျ ပှဲခြောငျတယျလို့ ဆိုရပမေယျ့ တျောတျောလေးရုနျးကနျပွီးမှာ လုဇျနီကီကှငျးကို ခွခေနြိုငျခဲ့တာပါ။ ဒိနျးမတျ၊ ရုရှား၊ အင်ျဂလနျတို့(၃)သငျးစလုံးကို ခကျခကျခဲခဲကစားရပွီး နှဈပှဲက ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ၊ တဈပှဲက မိနဈ(၁၂၀)မှာ အနိုငျရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခရိုအေးရှားအသငျးက ပွငျသဈအသငျးထကျ ပှဲပိုပနျးနတေဲ့အနအေထားလို့လညျး ဆိုရမယျ။
နှဈသငျးစလုံးရဲ့ကစားသမားစုဖှဲ့မှု၊ ခွစှေမျးကို ကွညျ့ရငျ ကွီးမားတဲ့ကှာဟခကျြမရှိဘူး။ ပွငျသဈအသငျးမှာ ဘာပေ၊ ဂရဈဇျမနျး၊ ပေါ့ဘာ တို့လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှရှေိသလို ခရိုအေးရှားအသငျးကလညျး ပါရီဆဈ၊ မိုဒရဈ၊ ရာကီတဈ၊ မနျဇူကဈ စတဲ့ဝါရငျ့ကစားသမားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ ပွငျသဈအသငျးနညျးပွ ဒကျဈခမျြ့ဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့ရငျ ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုရခဲ့တဲ့ ဇာဂါလို(ဘရာဇီးလျ)၊ ဘကျကငျဘောငျဝါ(ဂြာမနီ)တို့နောကျပိုငျး တတိယမွောကျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျးနညျးပွဒါလဈကတော့ အသငျးကို ပထမဆုံးအကွိမျ ဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ ပို့ဆောငျနိုငျခဲ့သလို ပထမဆုံးကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရယူနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ တကယျလို့ ခရိုအေးရှားအသငျးသာ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုရခဲ့မယျဆိုရငျ ကမ်ဘာ့ဖလားရခဲ့တဲ့ (၈)သငျးမွောကျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဗွိတိနျမီဒီယာတျောတျောမြားမြားက ပွငျသဈအသငျး ဗိုလျစှဲမယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပွီး (၂-၁)ဂိုးရလဒျနဲ့အနိုငျရမယျလို့ သုံးသပျနကွေတယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ .ဒီနှဈကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံသဈထှကျပျေါလာမလား၊ ခနျြပီယံဟောငျးပဲ ဗိုလျစှဲမလားဆိုတာ ရငျခုနျစှာနဲ့ခနျ့မှနျးလိုကျရကွရအောငျ . . .